Ma Quustayaasha Qarniga: 11 Xaaladood Oo Lagu Xaqiijiyay In Kooxda Liverpool Ay Tahay Koox Aan Isdhiibin Ilaa Ay Guulaysanayso. - Gool24.Net
Kooxda Liverpool ayaa wali u muuqata mid aan dhinaceeda dhulka la dhigi karin dhamaan kulamadii Premier League ee xili ciyaareedkan, wuxuuna Jurgen Klopp ku qoslay in kooxdiisa la hadal hayo in ay guuldaro la’aan ku qaadi doonto koobkan.
Jurgen Klopp ayaa muujiyay mid ayna xiiso galinayn in kooxdiisu ay guuldaro la’aan ku qaado koobka Premier League balse waxa uu muujiyay in muhiimada ugu wayni tahay in ay koobka ku guulaystaan taas oo uu hadda u arko in ay wax xaqiiq ah tahay.
Kadib guushii ay xalay Liverpool ka soo gaadhay kooxda Wolves oo ah kooxaha ugu dhibta badan marka martida loo yahay ayaa muujisay in Reds ay noqotay koox aan isdhiibin ilaa inta ay guulaysanayso xataa haddii ayna si fiican u ciyaarin.
Liverpool xalay waxay la kulmi kartay guuldaradii ugu horaysay ee xili ciyaareedkan laakiin goolhaye Alisson ayaa taas ka joojiyay waxaana in saddexda dhibcood u horseeday Roberto Firmino oo Liverpool u noqday boqorka gool dhalinta kulamada adag ee waliba martida.
Haddaba waxaa jira ilaa 11 kulan oo ay Liverpool ku soo xaqiijisatay in ay tahay koox aan aqbalin guuldarada ilaa inta ay ciyaartu dhamaanayso ama raadisa guusha qaab kasta oo ay ku helayso ilaa inta ay saddexda dhibcood ka helayso.
Roberto Firmino, Sadio Mane iyo Divock Origi ayaa ah xidigaha inta ugu badan waalida ku soo abuuray jamaahiirta Liverpool ee waqtiyada dhimashada ee dhamaadka ciyaarta goolal soo dhaliyay xiliyo ay Reds waqti adag ku jirtay.
Liverpool ayaa xili ciyaareedkan goolal dhalisay daqiiqada 90 ama waqtiga dheeriga ah 8 kulan oo ay guuldaro ama barbaro la kulmi lahayd, waana arin layaableh oo muujinaysa sida ayna kooxda Klopp isku dhiibin.
Waxaa sidoo kale jira 3 kulan oo ay Liverpool goolal dhalisay daqiiqadaha ka danbeeya 80 taas oo la micno ah in Reds ay natiijada ciyaarta badashay 11 kulan oo xili ciyaareedkan ah intii lagu jiray 10 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu danbeeyay.
Afar jeer oo ka mid ah kulamadan waxaa Liverpool xaalada xun ee ay ku jireen ka saaray Roberto Firmino waxaana ugu danbeeyay kulankii Wolves taas oo muujinaysa qiimaha xidiga reer Brazil ku leeyahay kooxdiisa Reds.
Sadio Mane, Mohamed Salah, Andy Robertson, James Milner, Divock Origi iyo Adam Lallana ayaa dhamaantood Liverpool natiijada ciyaarta u badalay intii lagu jiray min 10 kii daqiiqo ee ugu danbeeyay 11 ka kulan ee ay ma quustayaasha soo noqdeen.
Kooxaha Manchester United, Chelsea, Arsenal iyo Liecester City ayaa dhamaantood niyadjab kala soo kulmay Liverpool goolashii ay waqtiyada danbe soo dhaliyeen.
Goolasha ugu xamaasada badnaa waxay ahaayeen goolashii ay Sadio Mane iyo Andy Robertson min daqiiqadii 94 aad ka dhaliyeen kulamadii Chelsea iyo Aston Villa sida ay u kala horeeyaan.
Hal sawir oo soo koobaya daqiiqdihii ay Liverpool isbadalka kulamadan samaysay, xidigaha ku lugta lahaa iyo kooxihii dhibaatadan kala kulmay Liverpool ayaad halkan hoose kaga bogan kartaa.
Hadda waxaa bilaabantay in ay lays waydiiyo xiliga ay Liverpool koobka Premier league sida rasmiga ah ugu guulaysan doonto iyo kulamada xili ciyaareedka ka hadhsanaan doona waqtiga ay koobka ku guulaysan doonto waxaana sidoo kale la eegayaa haddii ay rekoodhka guuldaro la’aanta ku dhamaysan karaan.
Arinta saddexaad ee lays waydiinayo ayaa ah tirada dhibcaha ee ay Liverpool xili ciyaareedkan ku dhamaysan doonto maadaama oo ay haddaba haystaan 67 dhibcood halkii laga heli karayay 69 dhibcood waana kooxdii abid dhibcaha ugu badan ee Premier league heshay waqtigan oo kale.
Liverpool waxay axada booqan doontaa kooxda Shrewsbury Town ee kulanka FA Cupka waxaana la filayaa in Jurgen Klopp uu markale isbadalo badan samayn doono si uu u nasiyo xidigaha muhiimka ah ee kooxdiisa kowaad.